Iiraan Oo Marinka Hormuz Ku Qabsatay Markab Nooca Shidaalka Qaada Ah Oo UK Laga Leedahay |
Iiraan Oo Marinka Hormuz Ku Qabsatay Markab Nooca Shidaalka Qaada Ah Oo UK Laga Leedahay
Cawaaqib xun ayaa ka dhalan doona haddii Iiraan aanay sii dayn markabka ku safrayay calanka Britain ee ay ku qabsatay Gacanka, waxaa sidaas sheegay wasiirka Arrimaha Dibadda ee UK, Jeremy Hunt.
Milkiilayaasha markabka Stena Impero, ayaa sheegay in aanay u suuragelin inay markabka la xiriiraan haatanna “uu ku sii socdo dhinaca waqooyi ee Iiraan”.
Waxa ay sheegeen in 23 qof ay markabka saarnaayeen ay marinka Hormuz ku soo hujuumeen “koox aanan la garanayn oo doonyo watay diyaar qumaati u kacdana ay wehlinaysay”.
Waxaa isku gadaamay afar doonyood iyo diyaarad qumaati u kacda, Mr Hunt ayaa sidaasi sheegay.
Markab labaad oo Britain laga leeyahay balse ku safrayay calanka Liberia ayaa waxaa fuulay ilaalo hubaysan hasayeeshee haatan waa la sii daayay oo safarkiisii ayuu sii wataa.
Waddankii ugu horreeyay ee ka tirsan Latin America oo argagixiso u aqoonsaday Xisbullaah
Wakaaladda wararka ee Tasnim oo soo xigatay Hay’adda Dekedaha iyo Badda ee Iiraan ayaa sheegay: “Waxaa ina soo gaaray warar sheegaya in markab shidaal qaada oo Britain ay leedahay oo lagu magacaabo Stena Impero uu dhibaato sababayo.
“Waxaannu ciidammada miltariga waydiisannay in markabkan ay geeyaan dekadda Bandar Abbas si halkaas loogu sameeyo baaritaanka loo baahan yahay.”
Wakaallada wararka ee u janjeerta Ilaalada Kacaanka ee Iiraan ayaa sheegtay in markabka loo qabtay saddex shuruuc oo uu jabiyay awadeed: waxa ay damiyeen khadka GPS ee lagu ogaado hadba meesha uu markabka marayo, waxa uu marayay meesha looga baxo marinka Hormuz halkii uu mari lahaa barta laga soo galo iyo in markabku uu iska dhegatiray digniino loo jeediyay
Bayaan ayaa lagu sheegay: “Nooma aanay suuragelin inaan markabka la xiriirno kaas oo haatan ku sii socda dhinaca waqooyi ee Iiraan.
“Ilaa iyo haatan ma ay jirto wax dhaawacyo ah oo la soo tabiyay, badqabka shaqaalahana waa walaaca ugu weyn ee ay qabaan milkiilayaasha iyo maamulayaashuba.”
Xafiiska arrimaha dibadda bayaan ka soo baxay ayaa lagu sheegay: “Waxaannu raadinaynaa xog dheeraad ah sidoo kalana waxaannu qiimaynaynaa xaaladda kaddib markii ay soo baxeen wararka sheegaya inay wax ka dhaceen Gacanka.”
Ciidammada badda ee Ilaalada Kacaanka ee Iiraan ee loo xilsaaray inay gaaf wareegaan marinka Hormuz
Afhayeen u hadlay Golaha Ammaanka Qaranka ee Aqalka Cad ayaa sheegay in ay tahay markii labaad oo muddo ka badan todobaad ay UK lagu “bartilmaameedsaday qulqulato wax sii horunaysa” oo ay Iiraan dabada ka riixayso.
Halkan Ka Daawo:Dab Wajaale Ka Kacay Oo Khasaare Xoogan U…
Halkan Ka Daawo:Gudomiyaha Baanka Dhexe Ee Somaliland Oo Xafiiskii Ku…
Djibouti Oo Markii Ay Aragtay Dareenka Reer Somaliland Badashay Jihadii…
Halkan Ka Daawo;"Labadii Cishe Uu U Danbeeyay Madaarka Hargeysa Wax…
Warbixin: Waa Sidee Ciyaar Dhaqameedka Laga Ciyaaro Gobolka Sanaag.
W.Hawlaha Guucd & Dawlada Hoose Degmada Gabiley Oo Wadda Baneynta…